နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2017 ၏စာမျက်နှာ2NAB သတင်းများ | 89 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
လွတ်လပ်သောပြဇာတ် Feature ကိုများအတွက်လိုင်းထုတ်လုပ်သူ
လွတ်လပ်သောပြဇာတ် Feature ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဘုတ်သဲသောင်ပြင်များအတွက်လိုင်းထုတ်လုပ်သူ, 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် DE Duration: ပေးမလစာပေးမယောဘကိုအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ "သင်မင်္ဂလာရှိငါစောနောက်ဆုံးအချိန်" ဒုတိယပါလိမ့်မည် စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာ Chris Malinowski အားဖြင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်။ အဆိုပါအပိုင်းအစ, ဖွယ်ရှိ, ဘုတ်သဲသောင်ပြင်, ဝဲနှင့်ရိုက်ကူးပါလိမ့်မည် ...
ဇာတ်စင် Manager ကို
ဇာတ်စင် Manager ကိုကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:4ရက်သတ္တပတ်လစာ $ 250.00 ပေါင်း complimentary လက်မှတ်တွေယောဘအလုပ်အင်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကုမ္ပဏီ၎င်း၏ပထမဆုံးခရစ္စမတ်ထုတ်လုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုဤဒီဇင်ဘာလပြသပါ။ 2.5hr ပြဇာတ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိအဆင့် Manager ကညျရှာဖှေ။ flat ခ: $ 250.00 ပေါင်း complimentary လက်မှတ်တွေစွမ်းဆောင်ရည်ဇယား 12 /7- 12 / 24 Thurs - ...
ထုတ်လုပ်မှု Assistant ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:4ရက်သတ္တပတ်လစာ2- Complimentary လက်မှတ်တွေ (သာမျှ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်) ယောဘအလုပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဒါရိုက်တာ / စာရေးဆရာ & ပြဇာတ်ရုံထုတ်လုပ်သူရှာအကြောင်း 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှို့ဝှက်ဝေမျှမယ်အပေါ် posted လာမည့်ခရစ္စမတ်ရှိုးထုတ်လုပ်မှု Assistant ။ လျော်ကြေးငွေ -2complimentary လက်မှတ်တွေကိုပြသပါသည်။ 12 / 1 - 12 / 24 မှကိုယ်ရေးရာဇဝင် forward ပေးပါ: Gavin Troy ။ အခုပဲစာရင်းသွင်းလိုက်ပါတော့ ...
အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Austin, TX Duration: အပိုင်းအချိန် / နာရီလစာ $ 12 ပြောင်းနိုင်ပါစေ - $ 14k / နှစ်စဉ် 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘအလုပ် POSITION ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: အဆိုပါ TXMPA အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်နေပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားအလုပ်လုပ်မှ, အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်, ပညာရေးနှင့်အဝေးရောက်ထောက်ခံမှုပေးဒါရိုက်တာများ၏ TXMPA ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ...
Up ကိုအဆိုတော်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: 11 / 26 လစာယောဘဟာသစီးပွားဖြစ်များအတွက်အတွေ့အကြုံရှိမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်ရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ပေးမထားပါ။ 26-4 နာရီအဘို့ဤတနင်္ဂနွေ, Nov5ရိုက်ကူး။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကအရမ်း (ဟောင်းမုတ်ဆိတ်, အဟောင်းတွေများမှာကဲ့သို့အငယ်လူတစ်ဦးကိုကြည့်အောင်ရှာကြသည် ...
1st လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်စန်းမားကို့စ, တက္ကဆပ် Duration: ဒီဇင်ဘာ 9-11 လစာယောဘသည် 11 / 24 / 17 အပေါ် posted နှုန်းထားများ Send 12 / 09 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply လွတ်လပ်သောအတိုရုပ်ရှင်လက်ရှိရှာကြံနေပါတယ်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး 1st ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် reel (မရရှိနိုင်လျှင်) နှင့်နေ့စဉ်နှုန်းဘာသာရပ်လိုင်းအတွက်သင်္ဘောသား POSITION အားမရနှင့်အတူအကြောင်းပြန်ပါ။ ...
3 ရက်သတ္တပတ် Partner Company ကိုလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: ထုတ်လုပ်လစာ TBD ယောဘအလုပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဒါရိုက်တာ / စာရေးဆရာ & ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးလာမည့်စီမံကိန်းများအတွက်ထုတ်လုပ်မိတ်ဖက်ရှာကြံဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းထုတ်လုပ်သူအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ လျော်ကြေး: Gavin Troy: TBD မှကိုယ်ရေးရာဇဝင် forward ပေးပါ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? အတွက် Sign ကျေးဇူးပြု. ...
ဓာတ်ပုံဆရာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: ($ 2.5 တန်ဖိုး)6နာရီလစာ 100.00 complimentary လက်မှတ်တွေဓာတ်ပုံဆရာရှာကြံအလုပ်ပြဇာတ်ရုံထုတ်လုပ်သူအကြောင်း 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှို့ဝှက်ဝေမျှမယ်အပေါ် posted (မျှ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်သာ) ယောဘသည် စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ2ဘို့စီစဉ်ထားလာမည့်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးသည်။ 2.5 နာရီ - လာမည့်ခရစ္စမတ်ရှိုးသွန်း၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူး။ အဘယ်သူမျှမလစာ -6complimentary ...
2 ၏စာမျက်နှာ 89«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»